MI အမြင့်ကိုမှတ်မိသလား။ ဒီမှာသူလျှိုသရုပ်ဆောင်ကျောင်းသားတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် - သတင်း
ကျောင်းပြီးသောအခါသို့မဟုတ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ပျော်မွေ့ရန် CBBC ပြသသည့်အထဲမှ MI High သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုသေချာပေါက်ရရှိခဲ့သည်။ Tracy Beaker ကဲ့သို့သောပြောင်ပြောင်တင်းတင်းခံစားမှုမရှိသော်လည်းစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အချက်အချာကျန်ဖြင့်၎င်းကိုအခြားမည်သည့်အရာမျှမဖွင့်ပါကဆက်သွယ်မှုများမှ (Blane နှင့် Daisy fanfiction သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အထိ) အထိအရာအားလုံးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဆယ်ကျော်သက် grudges / အငြင်းပွားမှုများ။ MI High ဟာနာရီကြီးတစ်ခုပဲ။
သို့သော်ကလေးတီဗွီအားလုံးကဲ့သို့ပင်သင်ကြီးပြင်းလာပြီးအခြားအရာများကိုစတင်ကြည့်ရှုသည်နှင့်တပြိုင်နက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးမကြာခဏထပ်မံကြားရလေ့မရှိပါ။ ကောင်းပြီ, သူတို့နောက်တဖန်ကြားရလိမ့်မည်, MI အမြင့်၏သရုပ်ဆောင်ပြပွဲကတည်းကတော်တော်အလုပ်များခဲ့ကြပြီ။ သူတို့တက်ခဲ့ပြီးပြီအဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။
Moustafa Palazli - Blane
သငျသညျဉာဏ်စမ်းပဟေareိအဘယ် Spongebob ဇာတ်ကောင်
Blane ဖြစ်ကောင်းကလေးပရိသတ်ကိုအများစုသူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပုံကိုအိပ်မက်ဆိုးများအတွက်သွန်း၏အများဆုံးမှတ်မိခဲ့ပါတယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, သူ့ကိုကစားသူ Moustafa အကြောင်းကိုရှာတွေ့ခံရဖို့အများကြီးမဟုတ်ဘူး။
သူဟာအသက် ၃၀ ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာငါတို့သိပါတယ်။ တကယ်တော့ MI High ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုသူရနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောပုံကaသူကြိုက်နှစ်သက်မှုများနှင့်မနှစ်သက်မှုများအကြောင်းပြောဆိုသည့် ၂၀၁၄ ဗီဒီယို ။ ဒါပဲ!
ရသည်မှာသူသည် ual ည့်သည်အသွင်အပြင်နှင့် Basil's Swap ဆိုင်၌ Casualty တွင်ပေါ်လာသည်။ ပိုပြီးအချက်အလက်မရှိသောကြောင့်ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာ။ Mustafa, ငါတို့သင်တို့၏အသက်တာသည်လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းရနိုင်သည်။
Bel Powley - ဒေစီ
Bel Powley က Daisy ကို MI High မှာကစားခဲ့ဖူးတယ်။ သူမကသူမသရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုအခြားသူတွေထက်အများကြီးပိုလုပ်ခဲ့တာလို့ပြောရင်မျှတပါတယ်။
၎င်းသည် Pete Davidson ၏ Staten ကျွန်း၏ဘုရင်သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ဒိုင်ယာရီဖြစ်စေ၊ Bel သည်အလွန်အလုပ်များနေသဖြင့်သူသည်ထိုသို့သောနှိမ့်ချသောအစရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
Bel Powley (@belpowley) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
သူမ၏ Instagram မှစ သူမနေဆဲယူကေမှာနေထိုင်ပါတယ် အဘယ်သို့ပြောစရာရှိသေးသနည်း။ သူမသည်သူမထဲမှာပေါ်လာသမျှနှင့်အတူကရိုက်ချိုးပါတယ်။
ရာခေလသည် Petladwala - နှင်းဆီ
နှင်းဆီသည် MI High တွင်အရှည်ဆုံးသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး၊ ပြသခြင်းသည်ဆth္ဌမနှင့်သတ္တမရာသီမတိုင်မီစီးရီး ၁ မှ ၅ အထိလေးစားဖွယ်ကောင်းသည့်အပြုအမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Rachel Petladwala ဟာမျှဝေနေတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ သူမ၏အလုပ်၏သူမ၏ Instagram ကိုအပေါ်ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများ ။
သူမဟာ Citizen Khan၊ Doctors ရုပ်သံစီးရီးနဲ့ရုပ်ရှင်အတော်များများမှာထင်ရှားခဲ့တယ်။
Benjamin Kerfoot - အော်စကာ
အော်စကာသည်ကျောင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်အေးဂျင့်အသစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူသည်ဘလန်းထံမှလွှဲပြောင်းယူရန်ကြီးမားသောတာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဘင်သည်တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး Mustafa ကဲ့သို့ Casualty တွင်ပင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဘင်ရှိတယ် Instagram နှင့် တွစ်တာ , ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်သော retweets အပြည့်အဝဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူဖြစ်လာမှကြီးပြင်းရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်း၏အဘယျသို့မခိုင်မာတဲ့ခြေထောက်ရှိသည်။ Boo ။
ဒန်နီ John-Jules - Lenny
ဤသူ၏မျက်နှာကိုမြင်လျှင်၊ သူဖယ်ထုတ်လိုက်သောနှစ်ဆသောလုပ်ရပ်သည်သမိုင်းတွင်လူသားထုအစဉ်အဆက်အားဖြင့်ထင်ရှားသောအမြင့်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ Lenny Danny John-Jules ကကစားခဲ့ပါတယ်, သူသရုပ်ဆောင်မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ဒဏ္ofာရီအနည်းငယ်ပါပဲ။
Red Dwarf မှစတင်ခဲ့ပြီးသူသည် Death in Paradise နှင့် hit show အများအပြားတွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် သိသာထင်ရှားပါတယ် MI အမြင့်။ သူ့မှာဇနီး၊ ကလေး ၂ ယောက်ရှိပြီးသူ့ Instagram ကသူကအိုင်ကွန်လေးတစ်ခုနဲ့ပြည့်နေတယ်။
Danny John-Jules (@dannyjohnjules) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ထို့အပြင်သူသည် Arthur Christmas တွင် elf တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခြားသူများမှမတောင်းဆိုနိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Charlene Osuagwu - Carrie
Carrie သည် MI High ၏နောက်ပိုင်းထုတ်ဝေမှုတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်လူအများကညှိနှိုင်းခဲ့ကြသော်လည်းသူမကရုပ်မြင်သံကြား၌ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ပုံရသည်။
သူမ၏နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူ၏ယူကျု့ချန်နယ်မှအထက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမအနေဖြင့် The Undateable and First Dates Hotel တွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်ဟုသူမ၏ IMDB ကဖော်ပြခဲ့သည်။
Jonny Freeman က - ဖရန့်
နောက်ဆုံးမှာတော့ဖရန့်ခ်ကိုတွေ့တယ်၊ Jonny သည် Domino's, Ford နှင့် Trebor များအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှမည်သူမျှအွန်လိုင်းတွင်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ဘယ်သူက Jonny ကိုလိမ်နေတာလဲ၊ သင်ဒါမှမဟုတ် Wikipedia လား?!
ထို့အပြင်သူသည်မင်္ဂလာဆောင်လေးပါးနှင့်အမေရိကရှိအသုဘတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲအပြင် Silent Witness တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ထိုတော်တော်များများကပါပဲ။ အကယ်၍ သင်ဟာ superfan တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီစီးရီးတွေထဲကစီးရီးတစ်ခုခုကိုအတိတ်ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
•ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - CBBC ပြခန်းကိုရိုက်ကူးမည့်နေရာမှသင်မှန်းဆနိုင်ပါသလား။
•ဤအရာသည်သင်အကြိုက်ဆုံး CBBC ကလေးဘဝကြယ်များယခုအချိန်အထိဖြစ်သည်
•ဤသည်မှာ CBBC ၏အထင်ကရတင်ပြသူများယခုရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်
ဇီးကွက်တစ်ခု underrated ပါတီကျောင်းအဖြစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြောင်းပြောဆို
ငါတို့ရှိသမျှသည် Aimee ကဲ့သို့သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်၊ လိင်ပညာရေးကိုနောက်ဆုံးတွင်အာရုံစိုက်လိုက်သည်
BU ၌ရှိစဉ်က Nicholas Fuentes: 'ငါကလူကိုလှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအခမဲ့ပဲနေတယ်'
Ithaca ကောလိပ်တွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ရန်ပညတ်တော် ၁၀
စစ်မှန်သောဇာတ်လမ်းများအပေါ်အခြေခံထားသည့်အအေးဆုံး Netflix ၁၃ ခုသည်ပြသခဲ့သည်
Theta hazing တိပ်ခွေထဲမှာအထက်တန်းကျောင်းအတန်းဖော်ဟောင်းတ ဦး နှင့်စကားပြောခဲ့သည်